kuvhuraSUSE Leap 15.1 inosvika kumagumo ehupenyu (kugadzirisa) | Linux Vakapindwa muropa
vhuraSUSE Leap 15.1 inosvika kumagumo ehupenyu hwayo hunobatsira, saka kana iwe uine iyi vhezheni yeakakurumbira distro, iwe unofanirwa kukwidziridza kuvhuraSUSE Leap 15.2 izvozvi. Izvo hazvisi chete nekuda kwezvikonzero zvekuita, asiwo chengetedzo. Saka, zvakanakisa kuti iwe uvandudze system yako izvozvi kuti uwane vhezheni iyo inoramba iine rutsigiro.
Rangarira kuti openSUSE Leap 15.1 ine nhoroondo refu, sezvo yakaburitswa muna Chivabvu 2019 zvichibva pane sosi yeSUSE Linux Enterprise 15 Service Pack 1 (SP1), uye iine Linux kernel 4.19 LTS. Shanduko inonakidza yaive iine zvimwe zvinozivikanwa senge inozivikanwa NetworkManager kugadzirisa kubatana, nepo shanduro dzeserura dzichiramba dzichishandisa Wakaipa.
Iyo yakavhurikaSUSE Leap kuburitswa ine kutenderera kwemwedzi ingangosvika gumi nesere, uye haina mhando yekuburitsa yekuburitsa. Naizvozvo, muna Ndira 18, 31, yakasvika kumagumo, uye kana iwe uchine mudziyo une iyi vhezheni 2021, unofanirwa kufunga nezvazvo kugadzirisa kusvika 15.2. Iyo vhezheni yakaburitswa muna Chikunguru 2020 uye yakavakirwa pane SLE SP2 masosi, ine yazvino Linux 5.3 kernel uye inowanikwa kune ese maviri ARM, x86 uye PPC.
Ipo iwe uchiri kukwanisa kunakirwa neshanduro iyi, iro rakavhurikaSUSE boka rekuvandudza riri kushanda pane inotevera kuburitswa kweLeap akateedzana, ndiko kuti, ku kumisa kuvhuraSUSE Leap 15.3 nenguva. Mune ino kesi, yakavakirwa paSLE SP3, uye yakarongerwa kuburitswa muna Chikunguru 2021.
Kana iwe usati wavhuraSUSE zvakadaro uye uchida kuyedza iyo distro, iwe unotoziva kuti iwe unogona zvakare dhawunorodha vhezheni yazvino vhuraSUSE Leap 15.2 kubva kune yepamutemo webhusaiti. Unogona kusarudza pakati peiyo 4GB ISO mufananidzo kugadzira bootable svikiro, senge DVD kana USB, kana mufananidzo wakareruka we100MB chete iyo iwe yaunogona zvakare kupisa kune imwe svikiro, chete iwe unongova chete nemabote ekutanga uye kuisirwa mapakeji is inoita kubva kunetiweki, kurodha pasi zvese zvinodiwa panguva yekumisikidzwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » kuvhuraSUSE Leap 15.1 inosvika kumagumo ehupenyu hwayo
NetworkManager yakangopihwa senge yakasarudzika sarudzo yekutungamira kwenetiweki, idiki. Ini pachangu ndaive ndichiri kushandisa Wakaipa pakombuta yangu, iyo yandaisazotakura zuva nezuva ndichitsvaga WiFis nyowani.
Leap 15.3 iri muchikamu cheAlfa uye apa iwe unogona kuteedzera iyo yekuvandudza kutenderera kana iwe uchifarira kuzivisa zvikanganiso kana Beta yakagadzirira: